ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ထပ်မံကျ 76 2019 - သတင်း - 2019
ကုမ္ပဏီ Bethesda ၏ developer များထပ်မံကျ MMO သေနတ်သမား-76 အတွက်အကြောင်းအရာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အစီအစဉ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
နွေဦးအတွက် update ကို "တောရိုင်း Appalachia" ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ဂိမ်းကစားဂိမ်းထဲမှာထမင်းချက် ပူဇော်. , ဘီယာတားမြစ်ထား "ဘီယာအရက်ချက်-core" ပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်မတ်လ 12 ရက်နေ့ကခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်သည်သင်၏ဒဏ္ဍာရီပြန်ပေးလော့မှအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအချက်တွေကိုဖလှယ်ဖို့ဖြစ်လတံ့သော, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကုန်သည်မေလ 23 ၏အသွင်အပြင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တင်ပြချက်များအကြားရက်စွဲများ "ရုံသို့သွား!" ဖြစ်ရပ် "အလှမယ်" အလုပ် "Survival 'အစီအစဉ်" Paranormal-hoofed ထိတ်လန့် "နှင့်သစ်တစ်ခုမစ်ရှင်စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
ဤသည်နွေရာသီ, အပြင်, developer များအဆင့်မြင့်ကစားသမားများအတွက် Dungey နေရာစီစဉ်ထားခြင်း, အမိုးအကာ 96 နှင့်ဤတွင် 94. ၏အဖွင့်မှတ်သားကြောင်း "နျူကလီးယားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ" ကိုလွှတ်လိမ့်မယ်။
ဆောင်းဦးရာသီစာရေးသူသေးဘာမှကိုပြောသည်ကြပြီမဟုတ်သည့်အကြောင်းအရာ update ကို "ဟုအဆိုပါမြေယာထဲ့၏မြို့သား" မှတ်သားပါလိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုလူသိများသည်အသစ်က storyline အဓိကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဗီဒီယို Watch: Fallout 76 Wild Appalachia Official Gameplay Trailer (အောက်တိုဘာလ 2019).